५७ प्रतिशत नेपालीको हातमा मोबाइल | Bishow Nath Kharel
५७ प्रतिशत नेपालीको हातमा मोबाइल
२ करोड ६६ लाख जनसङ्ख्या भएको नेपालमा १ करोड ५३ लाखभन्दा बढीले मोबाइल प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये जीएसएम मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू १ करोड ४५ लाख रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै ग्रामीण भेगलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरिएको सीडीएमए प्रविधिका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू भने ८ लाख २९ हजार रहेको आव २०६८/६९ सम्मको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा मोबाइल प्रयोगकर्तामध्ये करीब ४८ प्रतिशत ग्राहक एनसेलका रहेका छन् । त्यस्तै नेपाल टेलिकमका ग्राहक भने ४५ प्रतिशत रहेका छन् ।नेपालमा अहिले ६ ओटा मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले जीएसएम र सीडीएमए प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । मोबाइल सेवाप्रति बढ्दो नेपालीको चाहनासँग मोबाइल उत्पादक कम्पनीहरू पनि नेपाली बजारतर्फ आकर्षित भएको नेपाल मोबाइल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष पुरुषोत्तम बस्नेत बताउँछन् । ग्राहकको चाहना तथा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपालमा मोबाइल व्यवसायमा लगानी पनि हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । मोबाइल व्यवसायमा वार्षिक करीब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने गरेको उनको भनाइ छ । आव २०६८/६९ मा मोबाइलको कारोबार १३ अर्बदेखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको उनको अनुमान छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करीब २० प्रतिशत बढी हो ।
सूचनाप्रविधिको बढ्दो विकासका कारण मोबाइल बोक्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । आव २०६८/६९ मा अघिल्लो आवको तुलनामा मोबाइलको आयात बढेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्क छ । केन्द्रका तथ्याङ्क निर्देशक सुयश खनालका अनुसार आव २०६८/६९ मा रू. ५ अर्ब ५१ लाख मूल्यबराबरको मोबाइल सेट नेपाल भित्रिएको थियो । यो आव २०६७/६८ को तुलनामा ११ दशमलव ९ प्रतिशतले बढी हो । आव २०६७/६८ मा रू. ४ अर्ब ४७ करोड ३६ लाख मूल्यबराबरको मोबाइल सेट आयात भएको थियो । यसमा पनि चीनबाट मात्र ९६ दशमलव ७ प्रतिशत आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । खनालका अनुसार १ दशमलव ३ प्रतिशत भने भारतबाट आयात भएको छ । अघिल्लो आवमा पनि चीनबाट ८५ प्रतिशत आयात भएको उनले बताए । अहिले मोबाइलको बजार उल्लेख्य रूपमा विस्तार हुँदै गएकाले यस क्षेत्रमा आयात, लगानी र प्रयोग व्यापक भइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रयोगका आधारमा स्मार्टफोन र ट्याब्लेट पीसीमा युवापुस्ता अगाडि देखिएका छन् । बस्नेतका अनुसार पछिल्लो समय ट्याब्लेट पीसी उपभोक्ताले बढी रुचाएका छन् । ल्यापटप र फोन दुवैको काम एउटैले गर्ने भएकाले पनि युवावर्गमाझ यो लोकप्रिय भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै स्मार्टफोनतर्फ सामसुङ ग्यालेक्सी एस टू, एस थ्री, एण्ड्रोइडलगायत नेपालमा निकै रुचाइएका मोबाइल सेट हुन् । नेपाल मोबाइल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार अहिले मुलुकभर १ करोड ५० लाखभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता छन् । त्यस्तै पुराना सेटलाई नयाँ सेटले विस्थापित पनि गरिरहेका छन् । एकजना मानिसले चारओटासम्म फरकफरक मोबाइल प्रयोग गर्ने गरेको उनको अनुमान छ ।
मोबाइलको पहुँच धेरै मानिसमाझ पुर्‍याउन सस्ता चाइनिज मोबाइलको पनि उल्लेख्य भूमिका रहेको छ । १ वर्ष अघिसम्म मात्र पनि चाइनिज मोबाइलको प्रयोग निकै बढी थियो । तर, अहिले चाइनिज मोबाइलको बजार विस्तारै घट्दै गएको बस्नेतको भनाइ छ । आईएमईआई रजिष्टर्ड र वारेण्टी नहुनुका साथै बिग्रेको अवस्थामा स्पेयर पाटर्स पनि नपाइने भएकाले चाइनिज मोबाइलको बजार विस्तारै घट्दै गएको उनले बताए ।
गतवर्ष मात्र सामसुङले ग्यालेक्सी एस थ्री, पप अफ प्ले र स्मार्ट स्टेलगायत नयाँ सेट बजारमा भित्र्यायो, जसलाई ग्राहकले अत्यधिक रुचाए पनि । इण्टरनेशनल मार्केटिङ सर्भिसेज प्रालिका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार अहिले बजारमा सामसुङका १ हजार ५ सयदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने मोबाइल सेट उपलब्ध छन् । त्यसमध्ये तीव्रगतिको इण्टरनेट र भिडियो सहजै चलाउन मिल्ने मोबाइल ग्राहकमाझ प्रिय छन् । यस्ता मोबाइलमा भएको ठूलो स्क्रिन र नयाँ विशेषताले मोबाइलको बजार बढाउन सहयोग पुगेको मल्होत्राको भनाइ छ । पछिल्लो समय सामसुङको बजारहिस्सा बढेको उनले बताए । नेपाली मोबाइल बजारमा २० प्रतिशत हिस्सा सामसुङले ओगटेको उनको दाबी छ । तर, नियोटेरिक नेपालले भने नेपाली बजारमा नोकियालाई कुनै पनि ब्राण्डले पछि पार्न नसकेको दाबी गरेको छ । नेपालमा ९० प्रतिशत मोबाइल हवाई मार्गबाट आयात हुने कम्पनीले बताएको छ ।
नियोटेरिक नेपालका प्रडक्ट म्यानेजर अश्विन काफ्लेका अनुसार यो वर्ष मोबाइलको कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । उनका अनुसार नोकियाको बजार मात्र १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको बढेको छ । यो वर्ष आएका नयाँ सेटहरू नोकिया ३०२, नोकिया एक्स २०२, नोकिया सी २०५, नोकिया ३०५, नोकिया ३०६ अत्यधिक रुचाइएका छन् । नयाँनयाँ विशेषता र गुणस्तरका कारण नोकियाका विभिन्न मोडल ग्राहकमाझ लोकप्रिय भएको उनले बताए । नोकिया ३०५ र ३०६ मा वाइफाईका साथै थ्रीजी सिम पनि चलाउन सकिन्छ । अहिले बजारमा नोकियाको मात्र ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको उनको दाबी छ । नोकियाको स्मार्टफोनको तुलनामा अन्य मोडलका मोबाइल सेटको विक्री बढेको छ । उनका अनुसार अहिले मासिक १ लाख २० हजार थान मोबाइल सेट विक्री हुने गरेको छ । त्यस्तै, ब्ल्याकबेरी, आइफोन, मोटोरोला र कलर्सका विभिन्न मोडल पनि नेपाली बजारमा लोकप्रिय छन् ।
Source : http://www.abhiyan.com.np/article-product_29ashoj2069_57pratisat#.UJJXQWe_-4M